Ahoana no hahafantarana raha voasakana tamin'ny WhatsApp 2019 | Vaovao momba ny gadget
Ahoana no hahafantarana raha voasakana tamin'ny WhatsApp 2019 ianao
Rafa Rodríguez Ballesteros | | fampiharana, WhatsApp
Azo antoka izany 100% amin'ireo namaky ity lahatsoratra ity, ary raha tsy saika, matetika izy ireo no mampiasa ny fampiharana hafatra faran'izay tsara, WhatsApp. Fampiharana iray izay nanova ny fomba fampiasantsika finday isan'andro na alina.
Ny fampiharana fandefasana hafatra quintessential izy izao no endrika fahita mahazatra indrindra amin'ny serasera manerantany. Be loatra ka nny fiteny ur dia nifanaraka taminy ka tonga amin'ny fampifangaroana matoanteny aingam-panahy avy amin'ny WhatsApp, «Whatsapping». Ary ny fampiasana azy aza dia nahatonga ny tahan'ny orinasa manolotra serivisy telefaona sy fifandraisana amin'ny Internet hanitsy amin'ny alàlan'ny fanolorana fonosana angona manokana.
1 Tsy mampandre antsika ny WhatsApp raha voasakana isika
2 Famantarana hahafantarana raha nanakana anay tamin'ny WhatsApp izy ireo
3 Ka ho fantatrao tsara raha voasakana amin'ny WhatsApp ianao
3.1 Andramo ampiana amin'ny vondrona iray
3.2 Olana amin'ny fiantsoana feo
Tsy mampandre antsika ny WhatsApp raha voasakana isika
Raisinay ho zava-dehibe izany Raha nahatratra ity lahatsoratra ity ianao dia satria mpampiasa WhatsApp ianao. Izany dia ny mahazatra indrindra raha manana smartphone ianao. Androany no holazainay aminao ahoana no hahalalana raha nisy nanakana anao amin'ny WhatsApp. Na dia toa hafahafa aminao aza izany, ny fanakanana mpampiasa azy amin'ny WhatsApp dia zavatra mahazatra kokoa noho izay azontsika eritreretina.
Safidy mahaliana amin'ny tontolo teknolojia fifandraisana mivantana toy izany. Azontsika atao ny mieritreritra antony maro ahafahan'ny mpampiasa iray manakana iray hafa. Ary manana an'io WhatsApp io ankasitrahana ity safidy ity. Tsy maninona mahay manakana mpampiasa hafa nefa tsy manome fanazavana na ilay olona nosakananay aza.
Ny tiana holazaina dia hoe afaka sakanan'ny mpampiasa tsy voatanisa isika nefa tsy fantatsika. Ny fampiharana ny Tsy mampandre antsika amin'ny fomba ofisialy ny WhatsApp rehefa voasakana ny mpampiasa antsika amin'ny hafa rehetra. Noho izany, raha tsy hoe misy mpampiasa hafa manamafy azy mazava amintsika izany dia tsy ho fantatsika izany.
Fa na dia tsy mampandre antsika aza ny WhatsApp misy "fikafika" ho fantatra. Amin'ny fanatanterahana fitsapana sasany dia afaka mahita isika raha misy olona manokana nanakana antsika. Misy fomba isan-karazany hanamarinana fa ny mpampiasa WhatsApp anay dia misy karazana fetra. Raha ny tokony ho izy dia tsy manakana antsika tsy handefa hafatra amin'ny mpampiasa manokana ny zava-misy fa voasakana ny isantsika.
Famantarana hahafantarana raha nanakana anay tamin'ny WhatsApp izy ireo
Ankoatra ny zavatra hafa dia mety ho tsikaritsika fa rehefa nandefa hafatra tamin'ny fifandraisana manokana isika, tsy mahazo valiny izahay sanatria. Manaitra izany koa tsy mipoitra mihitsy ny fifandraisana "Online" amin'ny fifandraisanao. Ary na dia samy izy roa aza mety ho vokatry ny kisendrasendraMiankina amin'ny haavon'ny fiziriziriana dia tena hafahafa.
Toy izany koa, mety ho izany no izy tsy afaka mahita izahay taorian'ny nandefasan'ny hafatra ny fizahana roa malaza manga. Famantarana izay tsy voafaritra mihintsy, indrindra satria fantatsika fa mety tsy namaky azy io na tsia ny mpandray na mety mamaly amin'izany fotoana izany. Na eo aza ny fanazavana hafa momba an'io.
Araka ny fantatsika, ity antony farany ity dia tsy voatery hifanaraka amin'ny sakanana. Anisan'ireo maro an'isa Safidy menio fanomanana atolotry ny WhatsApp no ​​faritra Privacy. Avy eto azontsika atao ny mampihetsika na mamono ilay "confirmation de vrai" amin'ireo hafatra voaray, na dia efa novakiantsika aza izany. Na dia tsy maintsy fantatsika aza fa noho io safidy io tsy mandeha dia tsy hisy hahalala raha namaky ny hafatrao izahay. Fa mitovy ihany, isika tsy ho hitantsika koa ny fizahana manga ao amin'ny resakay.
Misy safidy hafa mety hiteraka fikorontanana toa ny tsy afaka mahita ny fotoana fifandraisana farany. Izay koa azo ovaina amin'ny menio manokana momba ny fiainana manokana. Sa ahoana sary mombamomba momba ny fifandraisana izay ahiahiantsika aza manavao mihitsy, na manjavona fotsiny. Araka ny hitantsika, zavatra izay tsy voatery ho fahazarana. Azo antoka fa isika rehetra dia manana fifandraisana izay manavao ny mombamomba ny WhatsApp saika isan'andro, ary ireo fifandraisana izay mitohy amin'ilay iray izay napetrany taona maro lasa izay.
Fa misy karazana famantarana hafa izay hitarika antsika amin'ny famaranana azo antoka kokoa raha te hahalala raha voasakana izahay mpampiasa hafa. Famantarana azo antoka fa ho azontsika raha manandrana manao hetsika sasany isika nefa tsy mahazo ny valiny mahazatra. Mba hialana amin'ny fisalasalana, azonao atao ny manandrana ny iray amin'ireo lazainay anao eto ambany.
Ka ho fantatrao tsara raha voasakana amin'ny WhatsApp ianao
Andramo ampiana amin'ny vondrona iray
Iray amin'ireo fitsapana farany hahafantarana raha voasakana ny mpampiasa anay dia andramo ampiana anaty vondrona. Raha mpitantana vondrona iray isika dia afaka manampy fifandraisana maromaro ao aminy. Efa fantatray fa mora ny manampy fifandraisana iray na maromaro amin'ny vondrona iray, raha mbola manana ny andraikitry ny mpitantana izahay. Na mora kokoa aza, afaka manao ny fitsapana isika amin'ny alàlan'ny famoronana vondrona iray ary manandrana manampy ny fifandraisana izay heverinay fa nanakana anay
Ny mahazatra, raha mandeha tsara ny zava-drehetra, dia izany WhatsApp ampio amin'ity fifandraisana ity ho an'ny vondrona noforonina. Ary miseho ho mpandray anjara vaovao ao. Amin'izay mba raha mampiseho amintsika ny fampiharana hafatra milaza "Nisy lesoka" o "Tsy manana alalana hampiditra an'ity fifandraisana ity ianao" mazava ny raharaha, nosakanan'izy ireo tao amin'ny WhatsApp ianao.
Amin'ny voalohany raha mbola tsy misy fameperana na sakana, ary na inona na inona manelingelina antsika, misy mpampiasa afaka manampy iray hafa ao amin'ny vondrona WhatsApp. Ny mijanona ao, na tsia, dia efa fanapahan-kevitsika manokana. Fa raha tsy afaka nanampy fifandraisana tamin'ny vondrona iray izahay, dia satria tsy tian'ilay fifandraisana izany. Antony tsy azo iadian-kevitra hahafantarana fa ny mpampiasa anay dia nosakanan'io iray manokana.
Olana amin'ny fiantsoana feo
Na dia izany aza no antony tsy XNUMX isan-jato azo antokaNy fiezahana hanao antso am-peo amin'ny fifandraisana izay heverinay fa nahavita nanakana anay dia afaka mitarika antsika ihany koa. Milaza izahay fa tsy fitsapana azo antoka tanteraka izany satria raha tsy manana fandrakofana ilay olona antsoinay amin'izay fotoana izay dia ara-dalàna raha tsy mandeha ny antso. Fa raha tsy mamela antsika hanao antso amin'ny mpampiasa manokana i WhatsApp, dia azo inoana fa nanakana antsika izy ireo.
Izany no mahatonga an'ity fitsapana ity, hitarika antsika amin'ny famaranana voafaritra, tokony hanao izany mihoatra ny indray mandeha isika. Ary mba hahatonga azy io ho azo itokisana kokoa, manandrama miantso rehefa fantatsika fa ilay fifandraisana izay heverinay fa fantatray fa mety misy fandrakofana. Raha nanao ny iray tamin'ireo fitsapana ireo ianao, na izy rehetra, ary tsy afaka mifandray na mazava ny famantarana, dia azo inoana fa voasakana tao amin'ny WhatsApp ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » WhatsApp » Ahoana no hahafantarana raha voasakana tamin'ny WhatsApp 2019 ianao
Amazon dia nanolotra ny hankalaza ny lohataona (28-3-2019)
Manomboka amin'ny Amazon ny lohataona amin'ireo tolotra mahafinaritra ireo (27-03-2019)